musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » European Union inorambidza vafambi veAmerica
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
European Union kudzoreredza zvirambidzo zvekufamba kumaAmerican
European Union inobvisa United States kubva kune yakachengeteka-yekufambisa rondedzero nekuda kwespike mune itsva COVID-19 kesi.
EU kumisa kufamba kwese kusingakoshe kune vashanyi veUS.
EU kudzoreredza zvirambidzo zvekufamba nekuda kweUS COVID-19 surge.
Vashanyi veEU vachiri kurambidzwa kupinda muUS.
Vakuru veEU vakakurudzira kumisa kufamba kwese kusingakoshi kubva kuUnited States seUS nhamba nyowani dzenhamba dzeCOVID-19 dzakapetwa.
European Commission Mutungamiri Ursula von der Leyen
The European Union yambira nhengo dzayo nhengo kuti dzibvise United States, Israel, Lebanon, Montenegro neNorth Macedonia kubva pachinyorwa chenyika dzakachengeteka dzekufamba kusiri-kwakakosha, nekuda kwekuwedzera kwenhamba yezvirwere zvecoronavirus munyika idzodzo.
Chiziviso chanhasi neEuropean Council chinosvika kurudziro kumatunhu enhengo makumi maviri neshanu, ayo anochengetedza hutongi pamusoro pemiganhu yavo. Inodzosera kurudziro yaJune yekurerutsa zvirambidzo kune vafambi veUS.
Kurudziro iyi haisi yekusunga, zvichireva kuti nyika imwe neimwe ichabvumidzwa kusarudza kana ichiri kuda kubvumidza vashanyi veUS vane humbowo hwejekiseni, bvunzo dzisina kunaka, kana kuiswa wega.
Iyo EC inogadziridza mafambiro ayo ekufamba vhiki mbiri dzese, zvichibva pamatanho ehutachiona hwe COVID-19. Kuti zviongororwe "Safe" nyika inoda kusave nenhomba dzinopfuura makumi manomwe neshanu pavanhu zviuru zana mukati menguva gumi nemana.
Zvinoenderana neazvino data, iyo US yakaenzana 152,000 mitsva COVID-19 makesi pazuva svondo rapfuura, zvichienderana nenhamba kubva mukupera kwaNdira.
Ikozvino kuvhiya kuri kushungurudza zvipatara nevashandi vehutano. Anenge imwechete muzvikamu zvishanu zvekuchengetedza zvakanyanya zvasvika kanosvika 95% kugona.
Mwero wekufa wakwira zvakare - uchisvika pavhareji yeanopfuura chiuru pazuva. Vanopfuura hafu chete vevanhu vese vekuAmerica vakabaiwa jekiseni rakanangana neCOVID-1,000. Vanhu vasina kuvharirwa vane mikana ingangosvika makumi maviri nepfumbamwe yekubvumirwa kuchipatara neCOVID-19 kupfuura avo vakabaiwa zvakakwana.
Zvichakadaro, vashanyi kubva ku EU - uye zvizhinji zvepasi rose - zvinoramba zvakarambidzwa kupinda muUS pasi pezvirambidzo zvakaisirwa denda iri.
Mukutanga kwaNyamavhuvhu, manejimendi weBiden akanyeperwa kuti ari kufunga nezvechirwere chekudzivirira kuvhura miganho, asi hapana chakanzwikwa nezve chikumbiro kubvira ipapo.
Pakutanga mwedzi uno, Mutungamiri weEuropean Commission Ursula von der Leyen akati kushaikwa kwekudzokedzana hakuzobvumidzwa "kudhonza kwemavhiki".